Bayern Munich oo weerar ku ah Liverpool… (Yaa bartilmaameed u ah Bavarians?) – Gool FM
Bayern Munich oo weerar ku ah Liverpool… (Yaa bartilmaameed u ah Bavarians?)
(Munich) 12 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa walaac ka muujineysa mustaqbalka mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu muhiimsan kooxdeeda, iyagoo durba bilaabay raadinta baddelkiisa.
Mustaqbalka tababaraha Bayern ee Hansi Flick ayaa shaki badan la gelinayaa, iyadoo ay suuro gal tahay inuu xagaagan isaga hayaamo Alliaz Arena kaddib markii uu muran soo dhex galay isaga iyo agaasimaha ciyaaraha kooxda Jarmalka ah ee Hasan Salihamidžić.
Jariiradda 90mins ayaa warineysa in haddii Flick uu ka tago shaqada Bayern xagaagan, kooxda Jarmalka ah ayaa u dhaqaaqeysa soo xero gelinta macallinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp.
Tababarihii hore ee Borussia Dortmund ayaa heysta qandaraas uu Anfield kusii joogayo illaa 2024, balse Bavarians ayaa diyaar u ah inay Reds jeebka ugu shubto lacagaha lagu jebin karo qandaraaskiisa.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Klopp qudhiisu uu culeys ku dareemayo horyaalka Ingiriiska, sidaas darteedna uu doonayo qabashada naadiga Jarmalka ka dhisan oo uu 2008 ku dhowaada ka hor inta aan shaqada loo magacaabin Jurgen klinsmann.
Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 21-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Liverpool ee Champions League